काठमाडौँ , २३ साउन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘बा’ भन्ने सांसद निरु पालले झुठको खेती गरेर झुक्याएको खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सुनुवाई चल्दाचल्दै आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै सबैको ध्यान खिचेकी पालले उनको लुटिएको भनिएको मोबाइल नै घरमै भेटिएपछि झुठको खेती खुल्दै गएको छ ।
उनले आफू असुरक्षित भएको भन्दै पीएसओ माग गरी सरकारी सुरक्षा पाएकी छिन् । तर उनलाई उनको कोठा नजिक आफूमाथि भएको धम्कीको घटना अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन ।
पालले सुनाएअनुसार उनको कोठा रहेको मध्यबानेश्वरस्थित कृष्णभोग पार्टी प्यालेसपछाडि साउन १५ गते राति साढे ८ बजे अज्ञात हतियारधारी व्यक्तिहरु मोटरसाइकलमा आएका थिए । दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन नभएमा ठीक नहुने भनी कञ्चटमा पेस्तोल ताके यदि उनी अनुमोदित भएनन् भने ‘बा’ केपी ओलीले पनि तलाईं बचाउन सक्दैनन् भने । र, उनीसँग रहेको आइफोन लुटियो ।
यो जानकारी पाउनासाथ प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल टेकुस्थित प्रहरी परिसरका हाकिमहरुसँग कराए, किन अहिलेसम्म केही पत्ता नलगाएको भनेर । प्रहरी परिसरले एसपी रामदत्त जोशीको संयोजकत्वमा एउटा छानविन टोली बनाएको छ । तर, केही पत्ता लागेको छैन ।
प्रहरीले निरुलाई आशंका गरेको व्यक्ति कोही छन् कि भनेर सोध्दा केही नाम दिइन् । त्यसमध्ये केही व्यक्तिलाई प्रहरीले फेला पार्यो, सोध्यो, तर पुष्टि भएन । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)
हतियारधारी देख्ने वित्तिकै गोली हान्ने !
बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ,छोरी जन्मे एक लाख ! यस्तो छ प्रक्रिया